Grevin’ny UCTU : Tokony hotohizany mandritra ny herintaona -
AccueilRaharaham-pirenenaGrevin’ny UCTU : Tokony hotohizany mandritra ny herintaona
29/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nampiseho ny heriny ny UCTU sy ny mpitatitra manerana an’Antananarivo renivohitra sy ny manodidina tamin’ny alalan’ny fanaovana fahirano ireo mpandeha, izay marihina tsara fa mpamelona ny mpitatitra. Marina tokoa fa nikorontana ny fiainan’ny vahoaka noho ny tampoka, kanefa toa hain’ny olona ihany ny nandamina sy niatrika ny olana. Porofon’izany, niasa avokoa ireo minisitera, nisokatra avokoa ireo tranombarotra ary nanohy ny asa andavanandro ny olona. Fehiny, tsy sakana na fara andro ho an’ny fiainam-bahoaka ny fitokonan’ny mpitatitra na koa ny tsy fisian’ny taxi-be.
Noho izany, tokony hotohizan’ny UCTU sy ny mpitatitra mandritra ny herintaona na mandrakizay mihitsy aza ny fitokonan’izy ireo. Ny mpandeha izay mamelona ny mpitatitra amin’ny alalan’ny vola mivoaka any am-paosiny indray ve no atao takalon’aina sy atao fahirano tahaka ireny? Mandainga ny mpitatitra raha milaza fa tsy mahavelona ny asa fitaterana eto, porofon’izany mpitatitra no anisan’ny manan-karena indrindra eto amintsika. Tokony tsy misy mizàna tsindrian’ila eto amin’ny firenena, rehefa manome fanampiana na “subvention” amin’ny mpitatitra dia tokoa homena izany avokoa ny sehatra rehetra manao asa tena.
Tokony ho fantatry ny mpandeha sy ny vahoaka rehetra tsy an-kanavaka fa mifamadika mihitsy ny zava-misy eto amintsika. Ny mpandeha no tokony hametraka fepetra amin’ny mpitatitra satria ny mpandeha no mandoa vola hiveloman’izy ireo fa tsy ny mpitatitra indray no manao takalon’aina sy fahirano amin’ny mpandeha. Mila mifoha amin’ny torimaso mihitsy isika vahoaka manoloana ity tsindry hazolena sy fahirano lava isaka ny misy mikatsaka tombontsoa manokana ity.
Tokony ho fantatry ny mpitatitra ihany koa fa ny hetra aloan’ny vahoaka ary maro amin’izy ireny no mpandeha taxi-be no hanamboarana ny lalana sy ny fotodrafitrasa ahafahan’ny fiara fitaterana manao ny asany, ary mbola volam-bahoaka ihany koa io “subvention” nanaovana fahirano sy takalon’aina ny vahoaka io. Koa rehefa izany ihany, tokony hotohizan’ny UCTU sy ny mpitatitra an-taonany ilay fitokonana dia hiaraha-mahita eto izay voa mafy e!